HBO अधिकतम को लागी क्रमबद्ध 'The Shining' द्वारा प्रेरित श्रृंखला
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	HBO अधिकतम को लागी क्रमबद्ध 'The Shining' द्वारा प्रेरित श्रृंखला
by Waylon जोर्डन अप्रिल 16, 2020
by Waylon जोर्डन अप्रिल 16, 2020 2,347 हेराइहरू
एचबीओले यसको आगामी एचबीओ म्याक्सको लागि नयाँ सामग्रीका लागि सबै स्टपहरू बाहिर निकाल्दैछ, मे २०२० मा सुरू हुने स्ट्रिमि streaming प्लेटफर्म, र विविधताको अनुसार, यसले आधारित नयाँ श्रृंखला समावेश गर्दछ यो चम्काउने शीर्षक बेवास्ता.
शो को साथ निर्माण हुनेछ JJ Abrams र उसको खराब रोबोट प्रोडक्शन्स कम्पनी।
बेवास्ता कथित रूपमा ओभरल्याक होटेलका अनकही कथालाई अन्वेषण गर्नेछ जब स्टीफन कि byले आफ्नो १ 1977 XNUMX का उपन्यासमा लेखेका थिए, यो चम्काउने। उपन्यास एक परिवार मा केन्द्रित छ जो जाडो महिनाहरु मा होटल को मालिक को लागी हेरचाह को काम मा लिएका छन्। जहाँसम्म, तिनीहरूले चाँडै नै होटल हो भनेर फेला पार्दछन् कहिल्यै पनि अनक्युपिड
यो, सायद, एक क्यारियर मा राजा को सबै भन्दा प्रसिद्ध काम को एक धेरै क्लासिक्स पैदा भएको छ। उनले उपन्यासलाई ऐतिहासिकमा आधारित र कोलोराडोको इस्ट्स पार्कको पहाडी गाउँमा रहेको स्टानले होटेलमा पनि कथित रूपमा कतै भेट्टाए।
यो एक मात्र श्रृंखला Abram र Bad रोबोट स्ट्रिमिंग सेवा को लागी उत्पादन गरीरहेको छ। तिनीहरू पनि काम गरिरहेका छन् जस्टिस लीक डार्क, र डस्टर, एक मूल नाटक श्रृंखला।
HBO म्याक्स अर्को महिना प्रक्षेपणको लागि सेट गरिएको छ शो र चलचित्रहरूको विशाल क्याटलगका साथसाथै मौलिक सामग्री सबै प्रतिमाह १..14.99 डलरको लागि, हालको एचबीओ गो सदस्यताको समान मूल्य। HBO Go को लागी साइन अप भएका ग्राहकहरु, प्रक्षेपण दिनमा म्याक्समा अपग्रेड गर्न सक्षम हुनेछन्।
के तपाईं यस श्रृंखलाको प्रत्याशामा उत्साहित हुनुहुन्छ? हामीलाई टिप्पणीहरूमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ हामीलाई थाहा दिनुहोस्!